Kungani iBing Iwina Ukuseshwa Kwevidiyo ngeGoogle | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 13, 2009 NgeSonto, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
I-Google ingahle inake kakhulu umbhalo. Bheka umehluko omkhulu phakathi kwe- Imiphumela yosesho lwevidiyo yakwaGoogle futhi Imiphumela yosesho lwevidiyo ka-Bing. Imvamisa anginiki isikweletu seMicrosoft emnyangweni wokusebenziseka - kepha babethela lona!
Imiphumela Yosesho Lwevidiyo ye-Google
Imiphumela Yokucinga Yevidiyo ye-Bing
Isidlali Sokusesha Ividiyo se-Bing
Nayi i-rundown yezici ezisemqoka ze-Bing Video Search ku-Google Video Search:
Uma wenza i-mouseover ku-Bing, ividiyo idlala ngomsindo. I-Google ikuvumela ukuthi weqe okuqukethwe - kodwa kuphela ngemuva kokuchofoza ukudlala ividiyo kusixhumi esibonakalayo sayo.
I-Bing inikezela ngokubuka kuqala okukhulu kwesithombe-skrini sangempela kune-Google - othembela embhalweni ngokungadingekile. Ividiyo iyindlela ebonakalayo, iBing iyakuvumela lokho kuthathe indawo. Ungasusa igundane kusihloko ku-Bing ukuthola isihloko esigcwele uma sinqanyuliwe.
Uma udlala ividiyo kwi-Bing, icishe ibe nosayizi wekhasi… kumnandi - ikakhulukazi kokuqukethwe kwencazelo ephakeme, okusha. Amanye amavidiyo asafakwe kuhlu ngaphansi futhi asengadlalwa ngokuzenzakalela uma uwabeka phezu kwawo.
Ukunciphisa ukukhetha kwakho kosesho kulula futhi kuyinkimbinkimbi kubha eseceleni yangakwesobunxele ku-Bing. I-Google idinga ukuthi uchofoze Ukusesha Kwevidiyo Okuthuthukile ukuze ufike kuzinketho ezifanayo zokuhlunga.
I-Google ayenzi amakhasi amahle kakhulu noma amahle kunawo wonke, kepha ikhasi labo leMiphumela Yosesho Lwevidiyo alinakuphikiswa futhi libi. Ngokubona kwami, i-Bing yenze umsebenzi omuhle wokubeka ikhasi nokulenza lisetshenziswe kakhulu. Ukusesha ividiyo kunzima - futhi ama-algorithms akuwona amakhulu kakhulu… ujwayele ukuthi ube nokubhampa okuningi. Isimo esibonakalayo se-Bing nokusetshenziswa kwaso kwenza kube lula kakhulu ukusesha, ukubhekabheka nokuthola ividiyo oyifunayo.
Tags: i-engeliadalviezinye izindlela b2bbnpositivelindokuhlei-spsullivan